Tranon'ny tranokala ivelany 3x3m trano lay sy trano maitso | Winsom
40-99 Taratasy 100-199 Taratasy > = Pieces 200
Ity lay tranona ity dia mety amin'ny hetsika ivelan'ny fianakaviana, amoron-dranomasina, fety mianakavy, tobim-pivoriana ary fampiasa ara-barotra.M Azonao atao koa ny mametraka azy ao an-tokotaninao ho masoandro mody goavana ary mahafinaritra hahafinaritra ny fianakavianao sy ny vahininao.
1) Fototra vy vita amin'ny vovony fotsy, harafesina ary matevina.
2) lamba sy kalitao miaro amin'ny kalitao mahery vaika sy UV
3) Fisorohana tsotsotra sy azo zahana tsara
4) Ny fitahirizana sy ny fitaterana mora.
Laharana modely WS-F433
Anaran'ny entana Tranokala ivelan'ny hetsika 3x3m
Haben'ny vokatra 10x10ft (3x3m)
Fonony fitaovana 160gsm polyester
Fitaovana amin'ny serivisy tsy voatery
Spigrafaly. mombamomba ny tongotra-25x25 / 20x20mm, truss tube-10x18mm, ny hateviny-0.8mm
MOQ 40 isa
Mety amin'ny karazana fiasa ivelany any ivelany, toy ny seho, fety, BBQ, fety, fampiasana varotra sy ny sisa. Ny tampon-kaopy 10 10 metatra x 10-tongotra dia manome alokaloka 100 metatra toradroa ho an'ny olona 8-12 - ampy ho an'ny fianakaviana manontolo amin'ny fialokalofana sy ny alokaloka!
Azonao atao ny mametraka ny tranolay mora foana amin'ny alàlan'ny fisintonana fotsiny ny bracket, izay hamonjy anao be dia be. Ny mpivarotra sisa dia afaka mamatotra ny tadim-bolon-tady amin'ny zorony efatra ary manamboatra azy ireo. Ny vokatra azontsika dia azo raikitra miaraka amin'ny tady fisintonana amin'ny lafiny roa afa-tsy amin'ny zorony efatra, haavon'ny telo haavon'ny haavony.
Ny fantsona matevina dia manana fitoniana tsara sy hery manohana, ka tsy mora simba sy miankohoka. Ny endrika tonga lafatra sy ny fananganana premium dia hifanaraka amin'ny filanao. Mba hanamafisana ny sisin'ny lamba, dia manamboatra ireo akora plastika qualtiy avo izahay.
Ny zorony rehetra dia nasiana sosona roa sosona. Ny fehin-kibo Velcro dia mamatotra eo an-tampony mba hamboarina. Telo lahy tady. Mampiasa tady hanamboarana canopy misy tsatoka vy. Ny tady mitombo dia azo raikitra amin'ny fantsika amin'ny tany ho an'ny fahamarinan-toerana fanampiny.
Previous: Gazety ivelany ivelan'ny Gazebo 3x3m
Manaraka: Gazebo ivelany fivoahana ivelany miaraka amin'ny sidewalls 3x6m
40mm Profile Profile Profile 40 Profile 40 Profile 40